Nagu saabsan - Xuzhou Roc International Trading Co., Ltd.
Kooxda Dunida Gurigawaa soo saaraha ugu weyn uguna dhoofinta plywood iyo badeecooyinka laxiriira dalka Shiinaha, oo la aasaasay sanadkii 1993 6 shirkadood oo ka kooban. Hadda waxaan ku raaxeysaneynaa 73 khadadka wax soo saarka ee filimka soo wajahay plywood iyo plywood qurxoon.
Wax soosaarkayaga nooc kasta oo plywood waa 220,000m3 iyo 1,000,000m3 oo loogu talagalay filimka plywood wajahaya sanad walba. Ku qalabaysan mashiinno badan oo horumarsan, Talyaani IMEAS sanders, Mashiinka urta urta UROKO, Veneer Joint Tenderizers iyo mashiinno waaweyn oo qalalan, shirkaddu waxay u heellan tahay soo saarista iyo dhoofinta badeecadaha ugu tayada sarreeya filimka ay la soo gudboonaatay plywood iyo plywood iyo Antiskid Plywood.
Waxaan ku guuleysanay sharafka "Sumcadda caanka ah ee Shiinaha", "Waxyaabaha lagu kalsoon yahay ee Jiangsu" iyo "AAA Corporate Credit".
Shirkaddu waxay ku adkeysaneysaa mabda'a xakameynta tayada wanaagsan iyo daacadnimada markasta.
Iyo waxyaabahayaga waxaa cadeeyay IS09001: 2000, IS014001: 2004, CE, FSC, BFU oo sifiican looga iibiyay in kabadan 100 wadan aduunka oo dhan, sida Jarmalka, Australia, USA, Chile, Libya, UAE, Saudi Arabia , Kuuriya, Jabbaan, iyo wixii la mid ah.
Iyada oo ujeedadu tahay in la daboolo shuruudaha suuqa adduunka, waxaan iskaashi la yeelanay wax badan oo caan ah oo wax dhisayayaal ah, waxaan mas'uul ka nahay naqshadeynta iyo OEM ee loogu talagalay sumcadda iyo qalabka guryaha.
Iyada oo ku saleysan maareynteena tayada sare leh, kala-goynta iyo tikniyoolajiyada hogaamineysa, Kooxda Home World group ayaa si firfircoon u hogaamisa suuqa waxayna ku faantaa inay siiso alaabooyinkan iyo adeegyadan macaamiisheenna.